We.com.mm - သင့်ဆံနွယ် ကောင်းမွန်သန်မာနေစေဖို့ အစားအသောက် (၄)မျိုး
သင့်ဆံနွယ် ကောင်းမွန်သန်မာနေစေဖို့ အစားအသောက် (၄)မျိုး
ဆံပင်ဆိုတာ သင့်ရဲ့အလှတရားတွေကို အသွင်အမျိုးမျိုးဖြစ် ဖန်တီးဖော်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အရာတွေထဲကတစ်ခုပါ။ ပျက်စီးနေတဲ့ ဆံသားတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားရခြင်းဟာ မိမိရဲ့ ယုံကြည်မှု (Confident) ကို ကင်းမဲ့စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဆံသားတွေ မပျက်စီးအောင် ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမလဲဆိုတော့ ……
1. တောက်ပဖို့အတွက် ဆဲလ်မွန်ငါး
ဆဲလ်မွန်၊ ငါးသေတ္တာ၊ ငါးကွမ်းရှပ် စတဲ့ ငါးတွေဟာ အိုမီဂါ3ကဆီဓာတ်၊ အက်စစ် တွေနဲ့ ပြုလုပ်ထုပ်ပိုးထားသော်လည်း သင့်ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ကိုယ်အလေးချိန်တက်ခြင်း၊ ဝလာခြင်း မဖြစ်ပါ။ ဒီငါးတွေဟာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်တတ်တဲ့ တချို့ရောဂါတွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အပြင် ဆံနွယ်တောက်ပမှုအတွက်ပါ ပါဝင်အားဖြည့်ပေးနိုင်တဲ့ အစားအသောက်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
2. ဆံပင်ပေါက်ခြင်းကို မြန်ဆန်စေတဲ့ ဒိန်ချဉ်
ဒိန်ချဉ်မှာပါတဲ့ ပရိုတင်းဓာတ်တွေ နဲ့ လက်တိုဘက်စီးလပ် ဟာ လူကိုအကျိုးပြုတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒိန်ချဉ်မှာပါတဲ့ ပစ္စည်းတွေကလည်း သွေးလည်ပတ်မှုအတွက်ကောင်းမွန်စေပြီး၊ ဆံပင်ပေါက်ခြင်းကိုလည်း မြန်ဆန်စေနိုင်တဲ့ ဗီတာမင် B5 ဟာ ဆံပင်ပါးခြင်း နှင့် ပျက်စီးခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
3. ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကို တိုက်ခိုက်ပေးတဲ့ ဟင်းနုနွယ်
တခြား ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေလိုပါပဲ ဟင်းနုနွယ်သည်လည်း အာဟာဓာတ်များစွာပါဝင်တဲ့ အရွက်တွေထဲကတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဗီတာမင် အေ၊ ဗီတာမင် စီ၊ သံဓာတ်၊ ဗီတာမင် B9 တွေပါဝင်ပါတယ်။ ဒါတွေအားလုံးဟာ မျို့စေ့အားကိုကောင်းစေရုံသာမက ဦးရေပြားအတွက်လည်း ကောင်းမွန်စေတဲ့ ဓာတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆံသားတွေကို စိုပြေနေစေပြီး ပျက်စီးခြင်းမှကာကွယ်ပေးပါတယ်။
4. ဆံသားပျက်စီးခြင်းကို ကာကွယ်ပေးတဲ့ မာလကာသီး
အပူပိုင်းဒေသဘက်မှာ သီးလေ့ရှိတဲ့ မာလကာသီးဟာ ဗီတာမင် စီ အပြည့်ပါရှိပါတယ်။ မာလကာသီးတစ်ခြမ်းမှာ ဗီတာမင် စီ ဓာတ် ၃၇၇ မီလီဂရမ် ပါဝင်နေပါတယ်။ သင့်ရဲ့ဆံသားပျက်စီးခြင်းကိုလည်း ကာကွယ်ပေးတဲ့အတွက် ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အသီးတွေထဲကတစ်မျိုးပါပဲနော်။
အိမ်မှာသိမ်းမထားဘဲ လွှင့်ပစ်သင့်တဲ့အရာ (၇) မျိုး
ကင်ဆာရောဂါမဖြစ်အောင် ကြိုတင်ကာကွယ်ရန် ဘယ်လိုအစားအစာမျိုးတွေကို စားသုံးကြမလဲ
ဓမ္မတာ လာရင် ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ ဗိုက်အောင့်ခါးကိုက်တဲ့ သူတွေ
7 months ago by Katie Scarlett
Zombie Virus နဲ့တူတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါတစ်မျိုး အမေရိကန်က သမင်တွေမှာဖြစ်ပွားနေ ( Update News )
တခြားသူတွေထက် ပိုပြီး ခြင်ကိုက်ခံရတာဟာ ဒီအချက်တွေကြောင့်ပါ